Olee Otú a Woman Mee More on Ebay? Eme nnọọ ka hà a Man - News Ọchịchị
Olee Otú a Woman Mee More on Ebay? Eme nnọọ ka hà a Man
Men irite 20% ọzọ on nkezi karịa ndị inyom na-ere ka yiri ọhụrụ na ngwaahịa on eBay, awụfu ìhè on amaghị ihe ọ bụla biases na-emetụta ịzụ omume
Isiokwu a na-akpọ “Nwanyị ọ pụrụ isi mee ka ndị ọzọ on Ebay? Eme nnọọ ka hà bụ nwoke” e dere site Ian ịlele Science nchịkọta akụkọ, n'ihi na The Guardian on Friday 19 February 2016 19.04 UTC
Women na-ere ngwá ahịa online nwere ike o doro anya na ozi kpọtara elu ahịa ma ọ bụrụ na ha dị njikere ime ka otu onye dị mfe tweak ka ha pitch: eme ka hà na ha bụ.
Inweta apụta site a ọmụmụ nke chọpụtara na on nkezi ikom akwụ 20% ihe karịrị ndị inyom mgbe ha rere yiri ọhụrụ na ngwaahịa on eBay.
The kara yiri ka o si ọchịchọ maka ihe nile buyers – ma ndikom ma ndinyom – na-enye na-erughị maka ihe wepụtara ha auction na online n'ọma ahịa mgbe na-ere ere bụ nwaanyị.
"Anyị na-atụ anya ịhụ a ọdịiche, ma anyị na-achọpụta na ịdị ukwuu, karịsịa n'ihi na nnukwu mmetụta bụ n'ihi na ọhụrụ na ngwaahịa ebe ndị inyom na ndị ikom na-ere kpọmkwem otu ihe ahụ,"Kwuru Tema Kricheli-Katz, ọkà ná mmekọrịta na Tel Aviv University.
Related: Olee otú anyị pụrụ idozi amaghị ihe ọ bụla ịkpa ókè agbụrụ? | Nathalia Gjersoe
The results na-eche na inye ihe ọmụma banyere amaghị ihe ọ bụla biases na-emetụta ndị mmadụ na-azụ ahịa omume. One kwere omume nkọwa, zụlitere ndị dere, bụ na ndị mmadụ n'amaghị ama ekenye ihe bara uru ka ngwaahịa ekesịpde mmadụ karịa ndị inyom, -eduga pụrụ buyers iji sị ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ndị ọmụmụ e gosipụtakwa ya site mekwuo nnyocha, ọ ga-abụ otu n'ime ndị mbụ na-egosi na ezigbo ngwaahịa data otú inequality na ịkpa ókè na-etinye ndị inyom na a na-agbanwe agbanwe mwepu na online n'ọma ahịa.
Kricheli-Katz na Economist Tali Regev nyochara na-egosi US ahịa nke 420 kasị ewu ewu na ngwaahịa si na nso nke eBay ige n'etiti 2009 na 2012. Ha chọpụtara na ndị inyom mejupụtara ihe fọrọ nke nta a nkeji iri na ise nke ndị mgbere na dataset, na na n'agbanyeghị na erughị n'ire ahụmahụ, ha ụtọ mma na àgwà dị ka ndị mgbere.
The kara ke ahịa ugwo maka ngwongwo ahụ pụtara ìhè na-eji ngwaahịa nakwa dị ka ọhụrụ, ma ọdịiche dị nnọọ nta. on nkezi, azụ ahịa na-akwụ ụgwọ ndị inyom 97% nke price ha ugwo ikom maka otu ihe ahụ n'ihe mmadụ ihe. Oghere nwere ike ịbụ nta n'ihi na Bias megide nwanyị na-fọrọ nke nta ka dechapụ site na-azụ ahịa na-enwe ihe ntụkwasị obi na ụmụ nwanyị nke kọwara n'ihe mmadụ ihe, na-eme nnyocha dee na magazin Science ọganihu.
Ọ bụ ezie na eBay mgbere na-adịghị ekwupụta na ha okike na saịtị, na-eme nnyocha efehe a iche iche nnwale nke gosiri na-ere ákwà 'usernames, na ihe ha rere, bụ ezi ndu. "Ọ bụrụ na m na-ere ihe iPhone, ma m akpụkpọ ụkwụ na obere akpa ego, ọ ga-adị dịtụ mfe mata m ka a nwaanyị,"Kwuru Kricheli-Katz. "Na ihe ihe m na-ere, ndị ọzọ n'ụzọ ziri ezi ndị mmadụ nwere ike categorize m. "
Iji nwalee ha enyo na-azụ ahịa na-akwụ ụgwọ na-erughị ka ndị inyom karịa mmadụ nanị n'ihi na ha okike, ndị duo efehe ihe online nnwale. Ha jụrụ ndị na-ekwusa ego ole ha ga-akwụ maka a $100 Amazon ndepụta ego. Mgbe ndepụta ego e nyere site "Brad", na ọnụ ekwegasịrị ndị dị elu karịa mgbe ọ na-awa site "Alison".
The results na-egosi na, na nkezi, inyom adịrị njọ na online ahịa. Ma a delve n'ime data ekpughe ụfọdụ upsides maka nwanyi mgbere. Na ụfọdụ ige, ndị inyom a na-ere otu ihe n'ihi na ihe karịrị mmadụ mere. A akpan akpan nlereanya nke Barbie ere 16% ndị ọzọ na-ndinyom mgbere, mgbe Pita nri, n'amaghị ihe kpatara, ere 20% Ọzọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ndị mere a whopping 270% ọzọ mgbe ere a Nintendo Wii, 30% ọzọ on a thermal ebi, na 20% ọzọ on golf bọọlụ. A mpịachi mma ere 61% obere mgbe eresị ndị a nwaanyị karịa nwoke. "Ị gaghị achọ ịdị na nwaanyị n'ire na,"Kwuru Regev.
All nke doo ajụjụ banyere ihe a nwaanyị ime. One atụmatụ na-eme nnyocha nụrụ bụ n'ihi na ụmụ nwaanyị ịmụta a nwoke aha njirimara na eBay na-ere otu ihe na oge iji nyere aka zobe ha okike. Ma Kricheli-Katz ma ọ Regev bụ Fans nke na obibia. "Anyị achọghị ka bi n'ime ụwa ebe ndị na-ezochi ha okike. Ọ pụrụ iyi ka a mma atụmatụ, ma anyị ga-mbenata a ọdịiche n'ụzọ ndị ọzọ,"Kwuru Kricheli-Katz.
"A mma atụmatụ bụ maka ndị na-azụ anya n'ihi na ndị inyom na-ere ákwà na-azụta n'aka ha,"Kwuru Regev. "Ha pụrụ inweta mma ahịa, ma n'otu oge ahụ, ọzọ bidding na ụmụ nwanyị na ngwaahịa ga-enyere iji belata oghere. "Nke ka, -akwụ ndị inyom ahụ price dị ka nwoke mgbere.
"Gịnị n'ezie na anyị nwere olileanya bụ na site na-eme ndị mmadụ ndị ọzọ maara nke a amaghị ihe ọ bụla biases, ma eleghị anya, ka oge na-ọdịiche ga warara,"Kwuru Kricheli-Katz. Ka njọ, ndị inyom a na-akwụ ụgwọ ihe karịrị mmadụ maka ihe ndị ha zụtara on eBay.
Na magazin ndị dere bulie ajụjụ banyere ndị ọzọ n'ọma ahịa ebe mmekọahụ nke ndị mgbere bụ mgbe i na-ejighị: "Dị ka a iwu, eBay adịghị hoo haa na okike nke ya ọrụ. Otú o sina, ndị ikom na ndị inyom na-adị mfe okike-categorized site ndị ọrụ ndị ọzọ. Anyị chee na ọbụna karị divergences nọ na ọzọ ngwaahịa ahịa ebe okike bụ mgbe a mara,"Ha na-ede.
21950	4 Nkeji edemede, eBay, Equality, Ian Sample, Main ngalaba, News, Psychology, Science, The Guardian, UK ozi ọma
← 14 Times Google N'ezie Zọpụtara onye si Life [Ranker] The zuru okè Time of Year Mee 10 Big ịzụrụ [MENTALFLOSS] →